Ihe ị ga-eme na obodo Scotland nke Edinburgh | Akụkọ Njem
Ihe 5 ime na Edinburgh, ga-emerịrị
Susana Garcia | | Obodo, Edinburgh, Ido Scotland, General
Mgbe ọ bụla m na-eche nke ịga United Kingdom London na-abata m n'uche, ma e nwere ọtụtụ ndị ọzọ na-akpali ebe, otú ahụ ka m na-etinye edinburgh city, nke m na-ahụ dị omimi ma maa mma. Ọ bụ ya mere m ji chọọ ịme ọkwa dị mfe nke ihe ise ahụ amanyere ime na Edinburgh. Ihe ndị ahụ agaghị echefu ma ọ bụrụ na ị zọ ụkwụ ụkwụ na obodo a.
Obodo a enweghị ọtụtụ narị ihe ncheta dị ka Florence, mana enwere ihe na-atọ ụtọ, na omenala scottish Ọ bụ ihe pụrụ iche, yabụ na ị ga-achọ ịdị ka obiọma ndị mmadụ na ụdị ndụ ha biri. Dee ihe ise a nke ọma, mana ọ bụrụ na ịga, ị nwere ike ịnwe oge iji mee ọtụtụ ihe, dịka ịla n'iyi n'okporo ụzọ ochie ya iji chọpụta akụkụ jupụtara na ihe omimi na akụkọ ihe mere eme.
1 Gaa na Edinburgh Castle
2 Nwee Ahụmịhe Whiskey Scotch
3 Nwee biya na Scottish pubs
4 Ghichaa onwe gị na akụkọ ihe mere eme nke Edinburgh
5 Ahụkarị ịzụ ahịa
Mgbe ị bịarutere, ihe mbụ ị ga - achọ ime bụ ịga leta Edinburgh Castle a ma ama, nke dị n’elu ugwu ahụ Castle Hill. A na-echekwa ya n'akụkụ atọ nke akụkụ ya site na ọnụ ọnụ ugwu, enwere ike ịnweta ya naanị site n'ịrịgo na mkpọda ugwu ahụ, na mbido Royal Mile, otu n'ime ụzọ ndị kacha mara amara na nke na-ekwo ekwo n'obodo ahụ.
Ga ileta nnukwu ụlọ nwere ike were anyị ọtụtụ awa, yabụ ọ dị mma iji ụtụtụ ma ọ bụ ehihie wee hụ ihe nnọchianya nke Edinburgh nke ọma. Open nke 9:30 nke ụtụtụ ruo 17:00 ehihie ma ọ bụ 18:00 mgbede, dabere na oge nke afọ. Ọnụ ụzọ na-efu 16 pound magburu onwe ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ na-eduzi njem na Spanish banyere 26 pound.
O nwere ọdịnala nke emere kemgbe 1861, ma ọ bụ nke gbaa egbe egbe l'ime obu na a British n'oge ka ndị mmadụ mekọrịta ha ese. N'oge a, a na-eme ya dị ka akụkụ nke ebe nkiri ndị njem nleta nke nnukwu ụlọ, ebe ọ bụ ihe egwuregwu na-atọ ụtọ ịhụ etu esi agbapụ egbe ala a.
Ahụkarị okpueze jewels na-mara ebe a dị ka Scotland Nkwanye ugwu. Okpueze, Mkpanaka na mma agha nke Steeti ka edoworo na nnukwu ụlọ, ya na ‘Nkume akara aka’ amaara nke ọma. Ihe ngosi a bu ihe bara oke uru nye ndi Scottish ndi chiri eze. Na nnukwu ụlọ ị nwekwara ike ịga na National War Museum na nnukwu ụlọ mkpọrọ.
Nwee Ahụmịhe Whiskey Scotch
Ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, na scotch wiski ahụmahụ. Ọ bụ ụdị ebe ngosi ihe mgbe ochie ebe ha na-agwa anyị gbasara etu esi eme wiski na ị nwedịrị ike ịnụ ụtọ ya. Ọ dị ezigbo nso na nnukwu ụlọ, na Castle Hill, n'ihi ya, anyị nwere ike ime ihe niile n'otu ụbọchị. Nleta ahụ na-amalite site na ịrịgo na gbọmgbọm, dị ka a ga-asị na ọ bụ ogige ntụrụndụ, iji hụ usoro nke ị theụ mmanya ahụ. Mgbe ahụ, ha na-agwa anyị gbasara ụdị wiski na akụrụngwa a na-eme iji mụta otu esi amata ọdịiche dị n'iche ha. N'ikpeazụ ị ga-ahụ nnukwu nchịkọta wiski n'ụwa.
Nwee biya na Scottish pubs
A beerụ biya ma ọ bụ whiskey, nke kachasị bụrụkarị ihe n'ụlọ mmanya ndị a. I nwekwara ike iri na ha, dị ọnụ ala karịa ụlọ nri. Otu n'ime ihe ndị kasị ama bụ Elelọ Elephant na nkeji mahadum, amaara maka JK Rowling na-anọdụ ala ebe a ka ọ gụchaa akwụkwọ 'Harry Potter'. The Dome bụkwa onye ọzọ amaara obodo ahụ, na ụlọ nke bụbu ụlọ akụ nwere nnukwu dome, mosaics na ogidi na ụdị Greek. Ọ dị oke ọnụ ma ahịa rịrị elu ntakịrị, mana ọ bụ ebe ịtụnanya ịnwe kọfị.
Ghichaa onwe gị na akụkọ ihe mere eme nke Edinburgh
E nwere ọtụtụ ụzọ iji gụọ akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ. Gbanye Ala Gladstones Ga-enwe ike ịbanye ụlọ ụlọ ahịa nke narị afọ nke 1620 nke echekwara nke ọma, iji mụta banyere ndụ obodo ahụ ọtụtụ narị afọ. N'elu ala enwere ndi nkuzi ihe site na XNUMX ma enwere ike ihu ulo n'ulo n'ime ulo.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịga leta ndị National Museum nke Scotland, nwere ọtụtụ puku ihe gụnyere ọrụ nka, akụrụngwa, ọla ma ọ bụ ngwa agha iji mụta banyere akụkọ ihe mere eme nke Scotland ruo taa, ihe kachasị mma bụ ịbanye n'ụlọ ihe ngosi nka a bụ n'efu.
Ahụkarị ịzụ ahịa
Ndị anyị na-achọ iweghachi oge niile enweghị ike ịhapụ ehihie na-azụ ahịa. Buru n’uche na ụlọ ahịa ndị a na-emechi ihe dịka elekere 17:00 nke ehihie ma ọ bụ elekere isii nke ụtụtụ, ebe ọ bụ na ha nwere oge dị iche iche, na-emepe obere na Tọzdee. Fọdụ n'ime ngwaahịa ndị a na-agaghị echefu bụ uwe, na iberibe ajị, tweed ma ọ bụ akụkọ ifo Mpaghara ndị a na-akpọ Scottish. I nwekwara ike ịzụta Haggis, nri dị iche iche nke enwere ike iwere n'ụlọ na mkpọ. N'aka nke ọzọ, enwere ọtụtụ ihe dịgasị iche na wiski, mana ụtụ isi na-eme ka ọ bụrụ onyinye dị oke ọnụ. Achịcha na ụdị ụtọ dị iche iche bụ onyinye dị ọnụ ala ma na-atọ ụtọ iji welata ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe 5 ime na Edinburgh, ga-emerịrị
Kedu njem anyị ga - eme site na Paris
Esi hazie njem na ihe ị ga-ahụ na Bruges